Candy Shop Bingo review Julay 2022 | Bingo77 Somalia
Milkiilaha: Zenzero Limited
Qolalka bingo: 2
Waxaanu qiimeynay Candy Shop Bingo sida ay goobaha bingo 'nidaamka darajeeyo sida site GREAT bingo. Taasi micnaheedu waa in aad tahay yeelan doonaan waayo-aragnimo wanaagsan haddii aad doorato in aad halkaan ka ciyaaro. Si ay u xusaan Candy Shop Bingo sida site a GREAT, waxaan ka hubisay sumcadda liisanka, tirada visitors bil kasta site leeyahay, siyaasadda bonus waxay khusaysaa. Fiiri qaar ka mid ah macluumaadka hoose iyo go'aan ka gaadho in this casino online mudan tahay booqasho ama ma.
Candy Shop Bingo waxaa ay hadda ka shaqeeya Zenzero Limited . Waxay ka shaqaysaa hoos ku liisanka, soo saaray UK Khamaarka Commission iyo Gibraltar Khamaarka Commissioner - labaduba waa maamulka liisan sumcad. website waxay leedahay 2 bingo qol iyo dalabyo qaar ka mid ah kulan bingo gaar ah. luqadda ugu weyn ee goobta waa English iyo jirin fursado kale ayaa laga heli karaa. Candy Shop Bingo ogolaanaya PayPal soo bixid iyo labo ka mid ah hababka kale ee ka bixitaanka iyo sidoo. Dhammaan xeerarka muhiim ah, oo ay ku jiraan gunooyin iyo siyaasadaha baxaan, waxaa si cad loogu bixiyey oo ka kooban macluumaad faahfaahsan.
Bingo bonus & 20 dhigeeysa free on Fruit Shop
0800 901 2510 (Free toll)
In la abuuro xisaabta, waxaa lagu weydiin doonaa in aad si loo xaqiijiyo account by phone ama geliyaan warqad aqoonsi ah. Iyada oo ku saleysan macluumaadka ku saabsan website this iyo darajada, waxaan ku talinaynaa Candy Shop Bingo bilowga ah iyo ciyaartoyda bingo online xirfadeed labadaba. Tani waa a casino online weyn oo ay u badan tahay waxaad yeelan doontaa qibrad wanaagsan u ciyaaro waxa on.